Jidka Horumarinta - Jiangxi Sanxin Medtec Co., Ltd.
Marka loo eego heerarka ISO9000 iyo ISO13485, samee shirkado leh barta bilowga ah iyo qeexitaanka sare.
In isla warshadaha ee Shiinaha, waxaan ka gudubnay nidaamka maaraynta tayada iyo shahaadada CE ee TUV ee Jarmalka.
Waa tii ugu horreysay ee gobolka ka gudubta aaladda caafimaadka ee guriga shahaado CMD iyo helitaanka 8 shahaadooyin diiwaangelin wax soo saar ah.
Abaalmarinta Gobolka Jiangxi shirkad gaar loo leeyahay oo horumarsan.
Saliingaha isdabamarin badbaado leh iyo wixii la mid ah ayaa la helay ogolaanshaha suuq geynta Mareykanka fda510 (k).
Si rasmi ah ayaa loo dejiyay aagga Nanchang Xiaolan ee horumarinta dhaqaalaha iyo farsamada.
Waxyaabaha taxanaha ah ee loo yaqaan "Yixin" waxaa loo aqoonsan yahay inay yihiin wax soo saarka caanka ah ee Jiangxi.
Mashruuca farsamada ee shirkadda waxaa lagu xushay mashruuca Barnaamijka Tooshka ee qaranka.
Waxaa loo aqoonsaday inay tahay shirkad tiknoolajiyad sare oo heer qaran ah, oo alaabteeda cusub loo xushay badeecooyinka cusub ee muhiimka ah ee qaranka
Astaanta "Yixin" waxaa loo aqoonsan yahay inay tahay summad caan ka ah Shiinaha.
Dib-u-habeyn guul leh, aasaasid rasmi ah shirkad saamileyaal ah.
Waxaa la guddoonsiiyay dufcaddii ugu horreysay ee shirkado cusub oo hal abuur ku leh Gobolka Jiangxi.
Waxaa loo aqoonsaday inay tahay dufcaddii ugu horreysay ee shirkado cusub oo hal abuur ku leh Gobolka Jiangxi. Laanta xisbiga caafimaadka ee Sanxin ayaa loo dalacsiiyay laanta guud ee Xisbiga.
Waxaa lagu abaalmariyay inay tahay shirkad caan ka ah dhoofinta dhoofinta ee Gobolka Jiangxi.
Shirkaddu waxay aasaastay goobta shaqada ee aqoonyahannada.Shenzhen Stock Exchange oo si guul leh ugu liis garaysan jawharad.
Waxaa lagu abaalmariyay inay tahay shirkad tijaabo tijaabo ah oo wax soo saar wax soo saar leh ka fulisa Gobolka Jiangxi.
Xafladii daah furka Sanxin, Yunnan.
Sichuan Weisheng waxaa lagu aasaasay aagga horumarinta dhaqaalaha ee Meishan. 2018, waxay gaartay iskaashi istiraatiiji ah Chengdu Weisheng, iyadoo la ogaanayo horumarka boodka ee horumarka ee silsiladda warshadaha oo dhan laga soocayo qalabka sifeynta iyo qalabka sifaynta.
Anaga iyo Ningbo Ferrar, waxaan galnay qeybta qalliinka wadnaha, waxaana sameynay talaabo muhiim ah qaababka kaladuwan ee warshadaha caafimaadka iyo caafimaadka.Xaflada daah furka xinpinxi ee Gobolka Heilongjiang.
Sichuan Weisheng taxanaha alaabooyinka soosaarka salka wax soo saarka ayaa bilaabay aasaaska.
Daawo xididaysan [1997- 2005]
Dawada xididaysan [2006- 2010]
Dawada xididaysan [2011- 2015]
Dawada xididaysan [2016- 2020]